EncryptPad: Tarisa uye Gadzirisa Symmetrically Encrypted Chinyorwa paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kune akasiyana mavara edhita ezvinangwa zvakasiyana, kubva pamyorero edhita edhita anoshandiswa kubva kuchiteshi kunongonyora zvakapusa zvinyorwa, kune vapepeti nerutsigiro rwe syntax inosimbisa yemapurogiramu mitauro
Pachiitiko ichi isu tichave tichiziva yekunyora mhariri iyo yakanangana nekuchengetedza zvakavanzika zvemagwaro ako zvinyorwa. Iko kunyorera kwaticha taura nezvako ndiEncryptPad, inova mhinduro yakanakisa yekunyorwa kwemavara.
1 Nezve EncryptPad
2 Maitiro ekuisa EncryptPad paLinux?
EncryptPad ndeye yemahara uye yakavhurika sosi yekushandisa ye symmetric ciphertext. Iyi chinyorwa mhariri inogona zvakare kushandiswa seyekunyorera chishandiso chemabhainari mafaera.
Es iyo multiplatform application uye inoshanda mushe mushe ne Microsoft Windows, Linux, uye Mac masisitimu anoshanda. Inopa yakakwira nhanho yekuchengetedzwa nekunyora mafaira uchishandisa zvese kiyi faira uye password.
Uyu mupepeti Iyo inogona kushandiswa se graphical mushandisi interface kana pamwe neiyo terminal-yakavakirwa mameseji edhita.
Kusiyana nemamwe OpenPGP softwares ane chinangwa chikuru asymmetric encryption, chinangwa chikuru cheEncryptPad isymmetric encryption.
Chinyorwa chino chinoshandisa iyo OpenPGP RFC 4880 faira fomati kuitira nyore kushandisa kuwana.
Pindai Hunhu hwayo hukuru hunogona kusimbiswa:
Passphrase uye / kana kiyi kudzivirirwa kwefaira
Random kiyi faira jenareta uye inogadziriswa passphrase jenareta
Iyo nzira inoenda kune yakakosha faira inogona kuchengetwa mune yakavharidzirwa faira. Kana ikabvumidzwa, haufanire kudoma kiyi faira nguva dzese paunovhura mafaera.
Inosanganisira chishandiso chekunyorera mabhinari mafaira (mifananidzo, mavhidhiyo, zvinyorwa, nezvimwewo)
Iyo ine "Verenga Chete" maitiro mashandiro, ayo anotendera mushandisi kudzivirira netsaona data modification.
UTF8 zvinyorwa encoding
Inogadziridzwa Windows / Unix mutsara kubviswa
OpenPGP inoenderana faira fomati
Mishumo yekupfuura haina kuchengetwa mundangariro yekushandiswazve, mhedzisiro yeS2K chete
Encryption algorithms: CAST5, TripleDES, AES128, AES256
Kuvimbika Kudzivirirwa: SHA-1
Kudzvinyirira: ZLIB, ZIP
Mafaira mahombe anotsigirwa
Inosanganisira yakajairwa password password, iyo inogadzira yakasimba uye yakakurudzirwa passphrase.
Maitiro ekuisa EncryptPad paLinux?
Si unoda kuisa here chinyorwa chemavara pane yako system, unogona kushandisa chero ipi yedzinotevera nzira dzatinogovana pazasi.
Iyo yepamutemo nzira yekuisa iyo application ndeye kurodha pasi iyo AppImage faira kubva pairi, ingo enda ku iyi link
Pano Tinogona kurodha yazvino vhezheni inowanikwa, inova Beta 0.4.0.2.
Ivo vanogona kuvhura terminal uye kumhanya unotevera kuraira mairi:
Zvino chete iwe Isu tinopa mvumo yekuuraya ne:
Y tinogona kumhanyisa iko kunyorera ne:
Uye neizvozvo tinogona kutanga kushandisa mupepeti.
Uyewo kune repository yeUbuntu kwatinogona kuisa kunyorera, kunyangwe ndichifanira kukuudza kuti zvinobva kune vechitatu mapato, saka ibasa remushandisi uyo akanyora iko kunyorera kweUbuntu uye zvigadzirwa.
Zvekuiswa kwako kweUbuntu, Linux Mint uye chero kugoverwa kunobva pane izvi, Ingo wedzera iyo PPA ne:
Isu tinogadziridza iro repository:
Uye isu tinoisa ne:
Pakupedzisira, kune avo vari vashandisi veArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero kugoverwa kwakatorwa kubva kuArch Linux.
Tinogona kuisa zvinyorwa zvemavara kubva kuAUR repositories nerubatsiro rwemubatsiri, rwatinotaura mariri chinyorwa chakapfuura sechinotsiva Yaourt.
Ingo nyora mune terminal.
Kune zvekare imwe pasuru, iyo inoita kuti ishandise yazvino vhezheni iwanikwe nekukurumidza, chinokanganisa chete ndechekuti pasuru iyi inotora nguva yakati rebei kuvaka musystem. Kana iwe uchida kuiisa, ingo nyora:
Kana isu tavhura iko kunyorera, zvinotibvumidza isu kugadzira kiyi uye password yatinozoshandisa kune ese encryption uye decryption mabasa.
Chete isu tinofanirwa kudzvanya pa "Encryption> Gadzira Kiyi"
Uye pano ichatiratidza iyo nzira yekuchengetedza iyo faira uye nekukurumidza mumashure iyo ichatipa isu sarudzo yekuigovera iyo kiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » EncryptPad - Tarisa uye gadzirisa zvakaenzana zvinyorwa zvinyorwa paLinux
Carlos Rocha chinobata mufananidzo akadaro
Zvakanaka neVIM iwe unogona zvakare kunyorera zvinyorwa
Pindura Carlos Rocha